Momba anay - Hefei Super Trade Company Limited
Hefei super trade company voafetra dia naorina tamin'ny taona 1998. Any afovoan-tanànan'i Hefei, faritanin'i Anhui, Shina no misy anay, izay tsy lavitra afa-tsy ny ora fiaran-dalamby adiny 2 mankany Shanghai.
Izahay indrindra dia mifampiraharaha amin'ny lamba lamba ao an-trano, akora lamba sy lamba, akanjo, akanjo tongotra, tranga, kitapo, entana ampiasaina isan'andro, rakotra takelaka, jiro labozia sns. Izahay dia manondrana an'ireto vokatra ireto any EUROPE, USA, Amerika atsimo, Aostralia, Afrika, Moyen Orient, Azia atsimo atsinanana ary firenena hafa.
Ny vokatra dia haondrana indrindra any Amerika, Amerika atsimo ary Eropa, ary mahazo laza tsara avy amin'ny mpanjifanay izahay, mino izahay fa: "Kalitao Voalohany, raha manana kalitao ianao,
manana tsena ianao ". Any Etazonia, izahay dia manome servisy famaohana amoron-dranomasina, servieta fandroana, lamba firakotra sy akanjo fandroana ho an'ny Universal Studio; Any Amerika atsimo dia manana fiaraha-miasa amin'ny Super market Cencosud sy COTO 5 taona mahery izahay ho an'ny lakozia, lamba famaohana amoron-dranomasina, farafara Ary seza piyama. Any Eropa, dia mamokatra ny kojakojam-pandriana, akanjo fandroana, lamba firakotra, lamba famaohana, poncho ho an'ny Lidl sy Soccer club izahay. Carrefour koa dia iray amin'ireo mpanjifanay lehibe any Eropa.
Manana traikefa 20 taona mahery amin'ny lamba lamba izahay. Ny kalitao tsara sy ny serivisy tsara dia fahamoran'ny ekipanay. Tsy fananana alalana sasany fotsiny toa an'i Disney FAMA, Universal Studio ary Soccer Club no ananantsika fa manana mari-pahaizana OEKO, taratasy fanamarinana BSCI, taratasy fanamarinana taratasy FSC sns. Inona koa, ny orinasanay dia manana kalitao tsara, vidiny mirary ary endrika am-bolo, ny vokatray dia ampiasaina betsaka amin'ny vokatra lamba.
Mifikitra amin'ny fitsipiky ny "kalitao aloha, serivisy aloha, fanatsarana tsy tapaka sy fanavaozana hihaonana amin'ny mpanjifa" ho an'ny fitantanana.
Mba hahatanteraka ny serivisinay, dia manome ny vokatra amina kalitao tsara amin'ny vidiny mirary izahay.
Ny mpanjifa rehetra dia tongasoa hiara-miasa amintsika amin'ny fandraharahana mandresy amin'ny fotoana rehetra.
Raha liana amin'ny iray amin'ny vokatra sy serivisinay ianao dia aza misalasala mifandray aminay raha mila fanazavana fanampiny. Manantena mafy ny fiaraha-miasa ataonay izahay.
Taratasy fanao amin'ny fitafiana Aegean 2018
TEX OEKO 2019
Farafara fandriana microfiber, lamba famaohana an-dakozia, Lamba latabatra PEVA, Mpihazakazaka latabatra, Cover Milky Flannel Duvet, Fandriana volon'ondry coral,